သက်ရောက်မှုပြီးနောက်မော်ကွန်းတိုက် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: သက်ရောက်မှုပြီးနောက်
Tag Archives: ဆိုးကျိုးများအပြီး
တည်နေရာကင်းထောက်ကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများသာစီးတီး၊ နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်၊ နယူးယော့ခ်နယ်နိမိတ်အတွင်းသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အထိလစာ / နှုန်းမပေးရအလုပ်အကိုင် 10/29/20 တွင်တင်ထားသည်။ 11/02/20 ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မပါ ၀ င်ပါ။ နယူးယော့ / NJ areaရိယာ။ တနင်္လာနေ့ ၁၁:၂၂ ထက်နောက်မကျဘဲရွေးစရာရှိလိုသည်။ ယနေ့စတင်နိုင်သူကို ဦး စားပေး ...
Finishing Editor ကုမ္ပဏီလျှို့ဝှက်မြို့၊ ပြည်နယ်အဝေးသင် Duration 11/9 - 12/4 လစာ / နှုန်းမပေးရသေး 10/29/20 တွင်တင်ထားသောအလုပ်အကိုင် 11/09/20 ဖြင့်တင်ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်မရှိပါ။ မျှဝေပါ။ အလုပ်အကိုင်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပြီးမြောက်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ တနင်္လာနေ့၊ ၁၁/၉ ရက်မှ စ၍ ၄ ပတ်ကြာခရီးသွားလုပ်ငန်းပြပွဲတွင်အယ်ဒီတာလုပ်ရန်။ Jump Desktop 4/11 မှတစ်ဆင့် AVID ကို အသုံးပြု၍ စာဖြင့်ရေးသားထားသော၊ သမဂ္ဂမဟုတ်သောအဝေးထိန်းလုပ်ငန်း - ...
လက်ထောက်အယ်ဒီတာကုမ္ပဏီသာစာရင်းသွင်းသူများစီးတီး၊ ပြည်နယ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ အေဒီအချိန်ပြည့်လစာ / နှုန်းမပေးရသေးသောအလုပ်များ ၁၀/၂၉/၂၀၁၀ တွင်တင်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မျှဝေခြင်းအလုပ်အကိုင်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်အားထက်သန်။ အတွေ့အကြုံရှိသောလက်ထောက်အယ်ဒီတာများနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးများကိုရှာဖွေနေသည်။ အချိန်ပြည့်အလုပ်။ အနည်းဆုံး ၂ နှစ်အတွေ့အကြုံ၊ Adobe Premiere တွင်ကျွမ်းကျင်မှု၊ Photoshop နှင့် After Effects ကျွမ်းကျင်မှုများ။ ...
Audio Tech Company Subscribers only City, State Denver, CO Duration 11/2 and 11/3 Salary / Rate $500/12 + $250 gear Job posted on 10/29/20 Apply by 11/02/20 Website not provided Share About the Job We’re filming the first part ofadocumentary ataranch near Vail on Monday and Tuesday (Nov 2-3). One day will be filming fly fishing ...
Motion Graphics Artist Company Subscribers only City, State Culver City, CA / Remote Duration Immediate Salary / Rate not provided Job posted on 10/29/20 Apply by 11/13/20 Website not provided Share About the Job Fora10-episode docuseries plus promos, we need help with: – sprucing up current cards and adding more as needed – the re-creation of 17th century ...
Editor Company Confidential City, State Atlanta, GA Duration not provided Salary / Rate not provided Job posted on 10/29/20 Website not provided Share About the Job I am looking for an Atlanta Metro area-based film Editor forashort film I shot. If you’re interested, please send your reel and resume. This isapaid gig. Upgrade Now for more ...
Technical Director Company Subscribers only City, State Glendale, CA Duration not provided Salary / Rate not provided Job posted on 10/29/20 Website not provided Share About the Job Looking foraTD (+team) to runalive presentation over Zoom Webinar. Will need to be able to handle live keying and also incorporateapowerpoint presentation + multiple video clips. ...
Post Coordinator Company Subscribers only City, State Los Angeles, CA Duration Full time Salary / Rate not provided Job posted on 10/29/20 Website not provided Share About the Job We are seeking enthusiastic and experienced assistant editors and post coordinators for ongoing projects and full-time work. Minimum 2+ years experience, fluency in Adobe Premiere, proficiency in Photoshop and After Effects. ...
1 ၏စာမျက်နှာ 1,01912345 » 102030...နောက်ဆုံး»